CNC Turning (२-१२ अक्ष) - K-Tek Machining Co, Ltd.
हामी के प्रदान गर्न सक्दछौं?
K- टेक प्रेसिजन मशीनिंग धेरै कडा सहिष्णुताको साथ CNC मोडि mach मशीनिंग भागहरू प्रदान गर्दछ। कच्चा माल गोला बारहरू १ मिमीदेखि mm०० मिलिमिटरसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ। एक आईएसओ 00००१: २०१ and र आईएसओ / टीएस १9 49:: २०० registered दर्ता गरिएको सीएनसी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीको रूपमा, हामी उत्पादनमा मात्र ध्यान दिदैनौं तर राम्रो गुणस्तरको सीएनसी टर्निंग पार्ट्स पनि प्रदान गर्दछौं।
जे भए पनि उत्पादहरू कत्ति जटिल छन् वा ठूला छन्, हाम्रा कुशल ईन्जिनियरहरूले उनीहरूलाई समान शुद्धता र गुणस्तरमा उत्पादन गर्न सक्षम छन्। तपाईंले भर्खरको सीएनसी टर्निंग मेसिनबाट आशा गर्नुहुने सबै के-टेक मशीनिंग कं, लिमिटेड द्वारा बनाउन सकिन्छ।
भर्खरको सीएनसी टर्निंग टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर अत्यधिक स्वचालित उत्पादनको साथ, भिन्नता घटाउन सकिन्छ र सबैभन्दा टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
CNC Turning भनेको के हो?
सीएनसी कम्प्युटर नियन्त्रित छ, एक स्वचालित मेसिन उपकरण नियन्त्रण प्रणालीको साथ सुसज्जित। राउन्ड सामग्री चकमा राखिन्छ र घटकहरू प्राप्त गर्न सामग्री हटाउन घुमाउँदछ। सीएनसी टर्निंगले बाह्य सर्कल मात्र उत्पादन गर्न सक्दछ, आन्तरिक सर्कल (जस्तै ड्रिलिंग) ट्यूबको लागि पनि विभिन्न आकारहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।
हामीसँग सीएमसी टर्निंग मेशिनहरू दुबै साना र ठूला खण्ड उत्पादनका लागि १ मिमी व्यासदेखि mm०० मिलिमिटर व्याससम्म उच्च सटीक भागहरू उत्पादन गर्ने क्षमताको लागि छ। हाम्रा अधिकांश सीएनसी टर्निंग मेशिनहरू अतिरिक्त स्पिन्डलहरू र टुलिings्गहरूसहित सुल्झिएका छन् कि महँगो ह्यान्डलिंगलाई हटाउन एक प्रक्रियामा जटिल भागहरूको स्वचालित मसि .्ग सक्षम पार्न।
Ound गोलोपन र एकाग्रता सटीकता +/- ०.०mm मिमीसम्म पुग्न सकिन्छ
Face सतह मोटाई Ra0.4 मा पुग्न सकिन्छ।
Raw व्यास कच्चा माल राउन्ड बारहरूमा १ मिमीदेखि mm०० मिमी
• सीएनसी टर्निंग, मोडि and र-मिलिंग बहु मशीनिंग
• मिश्र धातु स्टील्स, स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्युमिनियम र प्लास्टिक।
• सानो र ठूलो भोल्युम ब्याचहरू।
K-Tek ले ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमेसन, मोटर वाहन, मेडिकल, नयाँ उर्जा र अन्य क्षेत्रहरुका आवश्यकताहरु अनुसार सबै प्रकारका सटीक मेसिनरी पार्ट्सको उत्पादनलाई अनुकूलित गर्न सक्छ। हामीले ISO9001: २०१ certific प्रमाणीकरण पार गरिसकेका छौं, वर्तमानमा हामीसँग २०० कर्मचारीहरू छन्। हाम्रो उत्पादन को बारे मा 20% जापान को निर्यात, 60% यूरोप र अमेरिका को निर्यात, हामी तपाईलाई उच्च गुणवत्ता र प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रो साझा सामग्री स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, तामा, कम कार्बन स्टील, ईन्जिनियरि pla प्लास्टिक र मिश्र धातु इस्पात को अन्य प्रकार हो, हामी पनि ग्राहकलाई गर्मी उपचार र विभिन्न सतह उपचार प्रदान गर्न सक्छौं:
हाम्रो सतह उपचार समावेश:
Inc जिंक प्लेटि ((कालो / जैतून / निलो /……)